म अाइजीपी भएँ भने प्रहरी सुकिलामुकिलाकाे हुँदैनः डिआइजी चन्द | Namastepost.com
म अाइजीपी भएँ भने प्रहरी सुकिलामुकिलाकाे हुँदैनः डिआइजी चन्द
HOT NEWS February 1, 2017 online dabali ,
काठमाडौँ, १९ माघ । नेपाल प्रहरीमा अबको केही दिनमै २५ औं महानिरीक्षक नियुक्ति हुँदैछ । उक्त पदको लागि डिआईजी जयबहादुर चन्द, नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल र बमबहादुर भण्डारी पहिलो हकदार हुन् । त्यसभित्र पनि डिआइजी जयबहादुर चन्द बलिया दाबेदार हुन् । प्रहरी संगठनमा स्पष्ट दृष्टिकोण र चुनौतीसँग सामना गर्न सक्ने दृढ अडानका रुपमा चिनिने चन्दले ‘जनतासँग प्रहरी, जिब्रोको गरिमा, मिठो बोलीमा’ जस्ता नयाँनयाँ कार्यक्रम ल्याएका थिए ।
चन्दसँग सिर्जनशील क्षमता अरुको भन्दा बढी छ । त्यस्तै उनी जोखिम मोल्न सक्ने क्षमता पनि राख्छन् ।
२०४४ सालमा प्रहरी निरिक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका चन्दले झण्डै ३० बर्ष प्रहरी संगठनमै बिताएका छन् । चन्दसँग पत्रकार देवीराम देवकोटाले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश ।
आईजीपी बन्ने लाईनमा तपाईँ लगायत कति जना छन् ?
हामी चारजना डिआईजीहरु आईजीपी बन्ने लाईनमा छौं । अहिले २७ जना डिआईजीहरु छन् । कानुनतः सबै आईजीपी बन्न पाउने हुन्छ । तर, हामी चारजना २ बर्षे सिनियर हौं । त्यसकारण चार जनाको चर्चा अलि बढी भएको हो । यसमा मेरो पनि चर्चा भईरहेको छ ।
तपाईँ आईजीपी बन्ने आधार के हो ?
मैले २०४४ सालबाट प्रहरी पेशामा काम गर्दै आईरहेको छु । अहिलेसम्म आउँदा झण्डै ३० बर्ष यो क्षेत्रमा बिताएँ । थुप्रै चुनौतिहरुको सामना गर्दै अहिले म यो अवसरको नजिक छु । अहिलेसम्म मैले आफ्नो पेशा कुशलतापूर्वक निर्बाह गरिरहेको छु ।
कानुनतः पनि म प्रहरी संगठनको मुख्य पदमा पुग्ने अवसर छ । तर, म नै हुन्छु भन्ने त अहिले छैन । किनकि अन्य साथीहरु पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुको पनि मेरो जस्तै चाहाना होला । यसको निर्णय त सरकारले गर्ने हो । सरकारले गर्ने कुुरा म अहिले भन्न पनि सक्दैन र हुन्छु भनेर ज्ञारेन्टी पनि गर्न सकिदैन ।
तपार्इँले ३० बर्षे कार्यकालमा प्रहरी संगठनमा के काम गर्नुभयो ?
मैले थुप्रै जिल्लाको कमाण्ड गरे । यसक्रममा मैले मधेसका जिल्लाको पनि कमाण्ड गरे । पर्साको कमाण्ड समहाल्दा मधेसमा शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गर्न त्यहाँको जनताले पाएका थिएनन् । त्यतिबेला त्यहाँ भुमिगत रुपमा १ सय २२ वटा संगठनहरु क्रियाशिल थिए । उनीहरुले शान्ति सुरक्षालाई चुनौति दिईरहेका थिए । तर, २०६४ सालमा ७ जना भारतीय क्रिमिनलहरुको इन्काउन्टर गरियो र उनीहरु प्रहरी कारबाहीमा मारिए । त्यसले मधेसमा क्रिमिनल संगठनहरुको गतिविधि ध्वस्त भयो । त्यसपछि बिरगंजका जनताले शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाए ।
काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर, बालाजु बम काण्ड, माईक्रोबसमा बम आक्रमण गर्ने, बारामा बम आक्रमण गरेर १० जना को ज्यान लिने अपराधिक गतिबिधिमा संलग्न मिस्टर जोन भनिने रोशन सहनीलाई पनि मेरै कमाण्डमा खटिएको प्रहरीले इन्काउन्टर गर्यो । जसको सिपाहीसँगै मृत्यु भयो । मैले कमाण्ड गरेका जिल्लाहरु बाँकेमा पनि त्यस्तै भयो । त्यहाँ पनि भारतीय क्रिमिनल ३ जनालाई राप्ती पारीमा प्रहरीले इन्काउन्टर गर्यो र शान्ति सुरक्षालाई मजबुद बनाउन सफल भईयो । त्यसैले मैले जहाँ जहाँ इन्काउन्टर गरे त्यसको संख्या पनि ठूलो छ ।
मकवानपुर, बुटवल, कपिलबस्तुलगायतका ठाउँमा मैले महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गरेको छु । मकवानपुरमा महेन्द्र तक्मा प्रहरी पुरस्कार पाएँ, यो पुरस्कार भनेको बीरताको पुरस्कार हो । सायद यो दशकमा यो पुरस्कार म बाहेक अरु कसैले पाएको छैन ।
मैले २०६१ सालदेखि मदिरा सेवन गरेकै छैन । यो मेरा सबै साथीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर, कपोलकल्पित र भ्रामक समाचारहरु लेखाएर आफ्नो दलाली गर्न लगाउने मान्छेहरुसँग कुनै तुक छैन । नभएका कामलाई भएका भनेर अनर्गल प्रचार गर्ने, मिडियाबाजी गर्नेहरुको बिनाश अनिवार्य देख्छु ।
तपार्इँले यस्ता कामहरु गरेको दाबी गरेपनि तपाईँकै कतिपय सहकर्मी साथीहरुले विवादीत काम गरेको भनेर आरोप लगाई रहेका छन् नी ?
कतिपयले आरोप लगाउन सक्छन् तर म के भन्छु भने मैले मेरो पेशाप्रति, आफ्नो कतव्र्यप्रति, आफ्नो धर्मप्रति दृढ र प्रतिबद्ध छु । कसैले आफ्नो धर्म छाडेको छ भने उसको बिनास निश्चित छ । त्यस्तै जुन बेला म आफ्नो धर्म छोड्छु त्यसबेला मेरा बिनास पनि निश्चित छ । कतिपयले मेरो बिरुद्ध कपोलकल्पित आरोप लगाउने गरेका छन्, उनीहरुको आरोपमा कुनै तुक छैन । मेरो बिरुद्धमा केहीले मदिरा सेवन गरेर कतिपयलाई हप्काएको भनेर अनर्गल प्रचार गरेका छन् । यो कुराको उनिहरुले पुष्टी गर्न सक्नुपर्यो ।
आरोपहरु किन आएको जस्तो लाग्छ त तपाईँलाई ?
यस्ता आरोप आउँछन् । तर, डराउने मान्छे होइन । किनभने आफुले गल्ती गरे पो डराउने हो, मेरो गल्ती नै छैन भने म किन डराउने ? त्यसैले बिरोधीहरुले आरोप लगाए भनेर म डराउँदिन । मेराबिरुद्धमा आरोप लगाउनेहरुले आरोपहरु पुष्टी गर्न सक्नुपर्यो । उनीहरुले आफ्नो पेशाप्रतिको धर्म छोडेर यो अनर्गल प्रचार गर्न खोजेका होलान् । मान्छेलाई विवाद गरेर बद्नाम गराउने र आफू सच्चा र अब्बल बन्न खोजेर यस्तो प्रचार गरेका हुन सक्छन् । त्यसको समयक्रमले जवाफ दिनेछ ।
प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गर्छ भनिन्छ हो ?
हरेक राजनीतिककर्ता समाजका लागि एक सच्चा नागरिक हो । उसले जुन समाजमा राजनीति गर्नुपर्छ, त्यहाँका समुदायको भावना, भनाई, चाहाना सुन्नुपर्छ त्यसकारण त्यो समाजको कुनै व्यक्ति कुनै कारणले प्रहरीको नियन्त्रणमा आयो भने त्यसबारे बुझ्नुलाई राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भनेर प्रचार गरिएको छ । यो गलत हो । किनभने उसले त्यो घटनाको बारेमा के हो भनेर चासो व्यक्त गर्नुलाई अन्यथा लिनुपनि हुँदैन । यो स्वभाविक हो ।
जनताको प्रतिनिधिको नाताले उसले सोध्न पाउनु उसको अधिकारको कुरा पनि हो । तर, उसको प्रभावमा परेर प्रहरीले निर्णय गर्छ कि गर्दैन त्यो मुख्य कुरा हो । प्रहरीले उसको प्रभावमा नपरिकन निर्णय गर्छ र अगाडि बढ्छ त्यस्तो अबस्थामा निर्णयकर्ता राजनीतिक गर्ने व्यक्तिको हुँदैन र प्रहरीले आफै गर्छ भने त्यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको अर्थमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रहरी संगठनमा चेन अफ कमाण्डको अभाव छ भन्ने छ यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
समाजमा भएको विकृति यो संगठनमा पनि पर्नु स्वभाविक हो । समाज हरेक हिसाबले प्रष्ट भएको अबस्था होइन । पोलिटिकल संक्रमण पनि छ । ‘स्टेट प्रफेक्ट स्मुथ्ली’ अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन ।
संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन राज्यका अगाडि चुनौतिका बिषयहरु छन् । यी चुनौतीहरुका कारणले मान्छेहरु अलमलमा छन् । यस्तो अवस्थामा संगठनमा यो देखिनु अन्यथा होइन । तर, हामीले अन्य संगठनमा यो संगठन प्रफेक्ट बनाउनै पर्छ । जीवन, सम्पति र सम्मानको सुरक्षा नेपाल पुलिसले गर्नैपर्छ । अरु जुनसुकैमा तलमाथि भएपनि यो संस्थालाई चेनअफ कमाण्डमा राख्नै पर्छ । यो मान्यतामा म प्रष्ट छु ।
राजनीतिककर्ता समाजका लागि एक सच्चा नागरिक हो । उसले जुन समाजमा राजनीति गर्नुपर्छ, त्यहाँका समुदायको भावना, भनाई, चाहाना सुन्नुपर्छ त्यसकारण त्यो समाजको कुनै व्यक्ति कुनै कारणले प्रहरीको नियन्त्रणमा आयो भने त्यसबारे बुझ्नुलाई राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भनेर प्रचार गरिएको छ । यो गलत हो ।
प्रहरी र जनताको सम्बन्धलाई कसरी गाढा बनाउन सकिन्छ ?
प्रहरी र जनता माछा र पानी जस्तै हो । पानी बिना माछा बाँच्न पनि सक्दैन । त्यसैले प्रहरी पनि जनता बिना बाँच्न गाह्रो छ । जनतासँगको सम्पर्क प्रहरीको गाढा हुनैपर्छ । कसैले पनि बर्दिको मान्छेलाई अर्कै देख्नु हुँदैन । त्यसको लागि मैले बिरगंजमा हुँदा बस्ती भेटघाटको कार्यक्रम संचालन गरेँ । थोरै समयमा पनि निकै लोकप्रिय भएको थियो ।
त्यसपछि मैले काडमाडौंको एसएसपी हुँदा पनि यो कार्यक्रम संचालन गरें, सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज हुँदा पनि मैले यस्तो कार्यक्रम चलाएँ, जसले प्रहरी र जनता बीचको सम्बन्धलाई गाढा बनायो । त्यस्तै ट्राफिक प्रहरीको इन्चार्ज हुँदा ‘जिब्रोको गरीमा, मिठो बोलीमा’ भन्ने सिकाएँ । यो कुरा अहिले प्रत्येक ट्राफिकले आत्मसाथ गरिरहेको छ । यी र यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरुले मलाई मेरो पेशाप्रति दृढ बनायो । त्यसैले प्रहरी र जनताबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँनै पर्छ ।
अब अन्तमा तपाईँ प्रहरीको प्रमुख भए देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो हुन्छ ?
म प्रहरीको प्रमुख नै हुन्छु भन्ने त ज्ञारेन्टी छैन । यो सरकारले गर्ने निर्णयमा भर पर्छ । तर, म भएँ भने प्रहरी संगठन हुनेखाने, सुकिलामुकीला, बोल्नसक्नेको मात्रै होइन प्रत्येक नेपालीको प्रहरी संगठन बनाउने प्रयास गरिनेछ । यो कुरा मैले मात्रै गर्न सक्छु भनेर भन्न सक्दिन अन्य साथीहरुले पनि सक्नुहुन्छ ।
म मेरो पेशामा आबद्ध भएको २०४४ सालमा हो । अहिलेसम्म झण्डै ३० बर्ष बिताउँदा मैले यही कुरा सिकेको छु । जुन कुरा प्रहरी संगठनमा प्रतिबद्धताका साथ लागु गरेर जानेछु ।